“१०.२५% एनबीबीएल डिबेन्चर २०८५” निश्काशन खुल्ला | Makalukhabar.com
“१०.२५% एनबीबीएल डिबेन्चर २०८५” निश्काशन खुल्ला
जेठ ९, काठमाडाैँ । नेपाल बङ्गलादेश बैंकले जेठ १० गते शुक्रबार देखि २० लाख युनिट (इकाई) ऋणपत्रको बिक्री खुला गरेको छ ।
यस मध्ये १२ लाख युनिट डिबेन्चरले हुन आउने कुल रु. १ अर्ब २० करोड ऋणपूँजी रकम विभिन्न व्यक्ति वा संघ संस्थाहरुलाई व्यक्तिगत तवर (Private Placement) को माध्यमबाट तथा ८ लाख युनिट डिबेन्चरले हुन आउने कुल रु. ८० करोड ऋणपूँजी रकम सर्वसाधारण नेपालीहरुको लागि सार्वजनिक निश्कासनको माध्यमबाट विक्री खुल्ला गरेको छ ।
सर्वसाधारणको लागि छुट्टयाएको मध्ये ५% अर्थात ४०,००० युनिट डिबेन्चर सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि समेत छुट्टयाईएकोछ । बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको नाम “१०.२५%एनबीबीएल डिबेन्चर २०८५” रहेको छ । उक्त ऋणपत्रमा वार्षिक १०.२५% ब्याजदर प्रदान गरिने छ भने ब्याज रकमको भुक्तानी भने अर्धवार्षिक रुपमा गरिनेछ ।
साथै उक्त ऋणपत्र १० वर्षमा परिपक्क हुनेछ । उक्त निश्काशनको बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंङिक रहेको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रतियुनिट १ हजार रुपैयाँका दरले न्यूनतम २५ देखि १ लाख युनिटसम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
ऋणपत्र नेप्सेमा सूचिकृत हुने भएकोले आवश्यक पर्दा सहज रुपमा खरिद बिक्रीगर्न सकिने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो राखि कर्जा समेत लिन सकिने छ ।
उक्त ऋणपत्रको लागि छिटोमा जेठ १४ गते र ढिलोमा असार ८ गते सम्म आवेदन दिन सकिन्छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको कुनैपनि शाखा कार्यालय तथा सी–आस्वाको माध्यमबाट आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त ऋणपत्रलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले औसत जोखिम जनाउने ‘एलबीबीबीप्लस’ रेटिङ दिएको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको चालु आ.वा.को तेस्रो त्रैमाससम्ममा खुद मुनाफा रु. १.१४ अर्ब, निक्षेप संकलन रु. ५६.०६ अर्ब र कर्जा लगानी रु. ५३.२५ अर्ब रहेको छ । बैंकले ९० शाखा, ७ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ७२ वटा ATM बाट बैंकिङ्ग सुविधा दिंदै आएको कुरा पनि जानकारी गराएको छ ।
टंक तिमिल्सिना र एलिना चौहानको ‘लेउ न माया लेउ’ (भिडियोसहित)
'वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन नियोजित'
नेपाली जहाज अब काठमाडौँबाट सोझै जापान
भदौ ३, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले भदौ १२ (अगष्ट २९) मा जापानको ओसाका लागि उडान भर्ने भएको छ । निगमले सातामा तीन पटक उडान भर्ने गरी नयाँ रुट तय गरेको हो । उडानको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको तथा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ । एअरबसको २७४ सिट क्षमता छ। सुरुको एक महिना यात्रुको संख्यामा केह... जारी राख्नुहोस...
नाडा अटोशोमा महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने, यस्ता छन् विशेषता
भाद्र २, काठमाडौं । नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु ‘एक्सयूभी–३००’ तथा ‘मराजो’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्दैछ । भारतीय बजारमा सार्वजनिक भएको छोटो समयमा रुचाइएका यी दुई गा... जारी राख्नुहोस...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको नाफा १६ करोड २२ लाख
भाद्र २, काठमाडौं । निर्जीवन बीमाको कारोबार गर्दै आएको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सत्रौं वार्षिक साधारण सभा आइतबार विरगञ्ज, पर्सामा सम्पन्न भएको छ । सो साधारण सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष श्रवण कुमार अग्रवालद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत प... जारी राख्नुहोस...
नाडा अटो शो’ मा ९५ ब्राण्डका २ पाङ्ग्रे देखि ४ पाङ्ग्रेहरुको भीड हुने
भाद्र १, काठमाडौं । १४ औं ‘नाडा अटो शो’ २०१९ यहि भाद्र १० गतेदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । आयोजक नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाद्र १० गतेदेखि १५ गतेसम्म ६ दिन ‘नाडा अटो शो’ हुने जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ ने... जारी राख्नुहोस...
घुससहित समातिए प्रधानाध्यापक नै, अर्का दुई जना पनि पक्राउ
कावासोती । ६५ हजार घुस रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले पश्चिम नवलपरासीबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–३ स्थित सिद्धार्थ माविका अध्यक्ष केदार गिरी र सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक लेखनाथ उपाध्याय रहेका छ... जारी राख्नुहोस...
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य !
साउन ३०, काठमाडौं । सुनको मूल्य फेरि प्रतितोला १२ सयले बढेको छ । बुधबार ७० हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुनको मूल्य बढेर आज (बिहीबार) ७१ हजार ५ सय पुगेको हो । तेजावी सुन आज प्रतितोला ७१ हजार २ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीचको व्या... जारी राख्नुहोस...
कामना सेवा विकास बैंकको निक्षेपमा ४५.८७ प्रतिशत तथा कर्जामा ५२.८६ प्रतिशतको छलाङ
साउन २९, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले समीक्षा अवधिमा आफ्नो ब्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । बैंकले गत आ.व. २०७४/०७५ मा निक्षेप १५.७५ अर्ब रहेकोमा ४५.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई २२.९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको छ । साथै कर्जा तर्फ सोही अवधिमा १३.२० अर्ब रहेकोमा ५२.८६... जारी राख्नुहोस...
प्राइम कमर्सियल बैंकको शाखा इमाडोलमा
साउन २९, काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले महालक्ष्मी नगरपालिकामा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आउ उक्त शाखाको बैंकका सञ्चालक प्रा.डा. मंगला श्रेष्ठले एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गरीन् । यस शाखाको सञ्चालन पछि बैंकको शाखा कार्यालय संख्या ७४ पुगेको छ । उक्त अवसरमार स्थानीय उद्योगी, व्यवशायी, शिक्... जारी राख्नुहोस...
सुनको भाउ ह्वातै घट्यो
साउन २९, काठमाडौँ । केही दिन देखी लागातार बृद्धी भएको सुनको भाउमा बुधबार ७ सय घटेर कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार सम्म प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा बिक्री बितरण भईरहेको छापावाला सुनको मूल्यमा आज सात सय घटेर ७० हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको... जारी राख्नुहोस...
डिजिटल वित्तिय सेवा विस्तार गर्न इसेवा र युके एडको सक्षमबीच सम्झाैता
साउन २९, काठमाडौं । डिजिटल माध्यमबाट ग्रामीण भेगका नागरिकहरुलाई वित्तिय सेवामा पहुँच पुर्याउन इसेवा र युके एडको सक्षमबीच सम्झौता भएको छ । इसेवा क्यास पोइन्टको तर्जुमा, विकास तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि तथा वित्तिय सेवामा पहुँच नभएका वा कम पहुँच भएका नागरिकहरुमा नविन डिजिटल वित्तिय सेवाहरुको पहुँच ब... जारी राख्नुहोस...
ललितपुरमा भिषण आगलागी: चार घण्टा बितिसक्दा पनी नियन्त्रणमा आएन आगो
त्रिपाठीले गरिन् मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग
भारतीय रकमसहित पाँच पक्राउ
रवि लामिछाने फेरि ५ दिन हिरासतमै
बसकाे ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु
प्रहरी नायब निरीक्षकलाई गोली हान्ने पक्राउ